कोही भएन महत गाउँको घाउ मेटाउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोही भएन महत गाउँको घाउ मेटाउने
द्वन्द्वकालमा जिल्लामै सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाएको महतका बासिन्दाको अवस्था उस्तै
खारा र थवाङमा शान्ति नमुना गाउँ कार्यक्रम, महतलाई बेवास्ता
गाउँलेको गुनासो छ : नेताहरू भोट माग्नमात्रै आउँछन्, हाम्रा कुरा सुन्नै चाहँदैनन्
कार्तिक २८, २०७४ दुर्गालाल केसी/हरि गौतम
महत (रुकुमपूर्व) — द्वन्द्वकालमा पूर्वी रुकुमको महत गाउँँ निकै चर्चामा थियो । २०५६ असोज ५ को राति माओवादीले प्रहरीचौकी आक्रमण गरी डीएसपी ठूले राईलाई अपहरण गरेपछि महत सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा पर्‍यो । माओवादीले प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई अपहरण गरेको यो पहिलो घटना थियो । घटनामा चौकीमा आश्रय लिइरहेका कांग्रेस महासमिति सदस्य पूर्णबहादुर बुढासँगै ६ प्रहरीको मृत्यु भयो, केही माओवादी घाइते भए ।
त्यसयता महतवासीले द्वन्द्वकालभरि कहिल्यै राम्ररी खान पाएनन्, बस्न पाएनन् । माओवादी र सुरक्षाकर्मीको युद्धस्थल बन्यो यो गाउँ । पटक–पटक भिडन्त र गाउँँलेमाथि ज्यादती भए । यही जिल्लामै सबैभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए । सुरक्षाकर्मीबाट ५२ र माओवादीबाट ६ गरी ५८ जनाको मृत्यु भयो । शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी पनि पटक–पटक सरकारमा भयो तर महतका लागि कसैले केही गरेन ।
‘यहाँ मान्छे नमरेको र गोली नलागेका कुनै घर छैनन् । रुकुमको खारा र रोल्पाको थवाङमा शान्ति नमुना गाउँँजस्ता कार्यक्रम भए तर यहाँ केही भएको छैन,’ महतका पूर्वगाविस अध्यक्ष तथा हालका वडाअध्यक्ष देवबहादुर बुढाले भने, ‘अहिले पनि नेताहरू भोट माग्न आइरहेका छन् । हामीले महतको घाउ मेटाउने कार्यक्रम चाहियो भनेका छौं तर उनीहरूले चित्तबुझदो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।’
माओवादीको आधार इलाका थबाङ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका हो महत । यहीकारण थबाङ जाँदाआउँदा हरेक पटक सुरक्षाकर्मीले यहाँ बासस्थान बनायो । माओवादीले पनि गाउँमै पटक–पटक सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गरे । यसको चेपुवामा महतवासी परे । महत गाउँ नै माओवादी भएको ठानी सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएर ६ वर्षीया बालिका उर्मिला बुढादेखि ७६ वर्षका वृद्ध कुठु बुढासम्मको हत्या गर्‍यो । ०६० असोज ६ मा सुरक्षाकर्मीले १७ सर्वसाधारणलाई घरघरमै गएर गोली हान्यो । उनीहरूको घटनास्थलमै मुत्यु भयो । बाँचेका सबै भागेर जंगलतिर गए । एक सातासम्म कोही गाउँ फर्कन सकेनन् र शव पनि उठेन । विस्तारै केही पुरुष आएर शव गाउँबाट टाढा लगेर फाले । काजकिरिया केही गर्न पाएनन् ।
‘फेरि सेना आएर मारिहाल्ला भन्ने डर थियो । घरमा बस्ने अवस्था नै थिएन,’ ६ वर्षीया छोरी उर्मिलालाई काखमै गुमाएकी ४५ वर्षीया बिनकुमारी बुढाले भनिन्, ‘लाश जताततै छरिएका थिए । हाम्रो संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि र किरिया गर्न पाएनौं ।’ बुढालाई उक्त घटनाले झस्काइरहन्छ । ‘माओवादी र सेनाबीच भिडन्त भयो । हामी गोठबाट आएर भर्खर घरमा पुगेका थियौं । डरले ढोका लगाएर भित्र पस्यौं,’ उनले भनिन्, ‘सेनाले ढोका खोलेर ड्याम्मै गोली हान्यो । काखमा रहेकी छोरीको गोली लागेर मृत्यु भयो । म र नन्दलाई खुट्टामा गोली लाग्यो ।’
दुई वर्षसम्म यस्तै भागाभाग भयो । गाउँमा सुरक्षाकर्मी आएर जो भेटिन्छ, उसैलाई गोली हान्न थालेपछि कसैले पनि घरमा बस्ने आँट गरेन । बोल्न नसक्ने दुई जना तथा दुई अशक्त अपांगलाई समेत गोली हानेर मारेपछि सर्वसाधारण गाउँमा बस्ने अवस्था थिएन । जनता मार्न लगाउने नेताहरूको चरित्र देखेर ८० वर्षीय सिङबहादुर बुढा निकै दु:खी छन् । ‘नेताहरू साह्रै स्वार्थी छन् । चुनाव आउँदा नमस्ते गर्दै गाउँ पस्छन् । जितेपछि अनुहार देखाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘यही जुनीमा देशमा धेरै परिवर्तन देखियो । नेताहरूले आफ्नो जीवन त बनाए तर हाम्रो अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।’
युद्धकालमा गाउँमा बस्न सकिने अवस्था नभएपछि उनी ०५६ मा भारत गए । ०५९ मा फर्कंदा दुई छोरा भेट्न पाएनन् । ‘माइलो छोरालाई सेनाले घरमै मारेछ, कान्छो जंगलमा मृत भेटिएछ,’ बुढाले भने, ‘हामीले जे दु:ख भोग्नुपर्ने हो भोगिहाल्यौं । अब नेताहरू मिलेर देश बनाउनुपर्‍यो ।’ उनकी ५६ वर्षीया श्रीमती विष्णु बुढा पनि अब जनतालाई हेर्ने शासन देख्ने धोको रहेको बताउँछिन् । ‘जति लडाइँ/झगडा भयो भैहाल्यो, जनता मार्नु मारिहाले । अब चुनाव जित्ने नेताले जनता हेर्ने काम गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘अरू हामीलाई केही चाहिएन, शान्ति होस् । गरिब जनताले सुखसँग साँझबिहान खान पाइयोस् । नेताहरू फेरि लडाइँ/झगडा नगरून् ।’
महतका ५४ वर्षीय आशबहादुर बुढालाई पनि युद्धले सताइरहन्छ । ०५६ असोज ३० गते दसैंको दिन थियो । खेतबारीको काम सकेर भर्खर घरमा पुगेका थिए । प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । माओवादीको आरोपमा रातभर नाङ्गै बनाएर कुट्यो । गाउँकै अन्य दुई महिला र चार पुरुषलाई पनि त्यसैगरी यातना दियो । ‘राति मार्ने तयारी गरेर गाउँमाथिको जंगलमा लग्यो । खाल्डा खनेर ठिक्क पारेको रहेछ,’ उनले रुँदै त्यो दिन सम्झे, ‘म बरु आफैं मर्छु भनेर भीरबाट हाम फालें । रूखमा टाउको बजारियो । पछाडिबाट गोली हान्यो, खुट्टा र पाखुरामा गोली लाग्यो । तैपनि लडदै लडदै भागें । बाँकी ६ जनालाई जंगलमै मार्‍यो ।’
त्यसपछि उनी तीन महिना डालिबाङ गाउँस्थित दिदीको घरमा बसे । उपचार गर्नुपर्ने भएपछि भारत गए । त्यसपछि पनि युद्ध अन्त्य नभएसम्म घर फर्कन सकेनन् । ‘अहिले पनि कतिबेला दिमागले काम गर्दैन । ऋण गरेर उपचार गरें । कति नेतालाई बिन्ती बिसाएँ तर कसैले केही हेरेन,’ उनले भने, ‘अहिले भोट माग्न आउने नेतालाई पनि मलाई न्याय देऊ भनेको छु । मलाई पैसा चाहिएको छैन । युद्धले घाउ अहिलेसम्म निको भएको छैन । यो घाउ कसले मेटाइदिन्छ ?’
सुरक्षाफौजको ज्यादतीसँगै तत्कालीन माओवादीले पनि सीआईडीको आरोपमा ६ जनाको हत्या गर्‍यो । दुवैतर्फको ज्यादतीले महतलाई ठूलो पीडामा राख्यो । ४५ वर्षीय श्रीमान् ओमप्रसाद बुढालाई माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेको घटनाले ६५ वर्षीया मनहुकी बुढालाई अझै रुवाइरहन्छ । ‘गाई ग्वाला गएको बेला अपहरण गरे । ३ वर्षसम्म ज्युँदै छन् कि मरे भन्ने केही थाहा भएन,’ उनले भनिन्, ‘पछि आफैं किरिया गर्‍यौं । कहिलेकाहीं मरेका छैनन् कि जस्तो लाग्छ । नेताहरू भोट माग्न आउँदा त्यो घटना झल्याँस्स दिमागमा आउँछ । नेताहरूसँग रिस उठ्छ ।’
महतले भोगेका यी सबै दु:खपीडाको क्षतिपूर्ति कुनै किसिमले पनि हुन नसक्ने ४९ वर्षीय रामकुमार बुढाको भनाइ छ । सुंगुरलाई दाना दिएर घरभित्र पस्दै गरेकी ११ वर्षीया छोरी सुकमाया सेनाको गोलीबाट मरेको घटनाले उनलाई विक्षिप्त बनाएको छ । ‘हामीले भोगेका पीडा कसले सुन्छ ? नेताहरू भोट माग्नेबाहेक अरू केही गर्दैनन् । हाम्रा कुरा राम्ररी सुन्न पनि चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘युद्धमा सबैभन्दा बढी क्षति भोगेको गाउँमा विकास गर्नुपर्दैन ? खानेपानीको दु:ख उस्तै छ । सधंै गाडी चल्ने बाटो छैन । चुनावमा आउने नेता सधैं आउनुपर्‍यो । हाम्रा समस्या बुझिदिनुपर्‍यो ।’
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ २०:३६
कप्तान गुरुङको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा लाग्यो पूर्णविराम [फोटोफिचर]
राष्ट्रिय टिमका १५ औं कप्तान । ५० क्याप । नौ गोल । सोलिडारिटी कप विजेता ।
कार्तिक २८, २०७४ राजु घिसिङ
काठमाडौं — नेपाली राष्ट्रिय टिमका १५ औं कप्तान अनिल गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट मंगलबार सन्यास घोषणा गरेका छन् । उनले एसियन कप २०१९ छनोटमा फिलिपिन्सविरुद्ध एन्फा कम्प्लेक्समा गोलरहित नतिजा निकालेपछि राष्ट्रिय टिमसँगको १० वर्षे करिअरमा पूर्णविराम लगाएका हुन् ।
‘यहाँसम्म आइपुग्ने कहिल्यै सोचेको थिइनँ,’ एन्फाद्वारा आयोजित बिदाईमा भावुक देखिएका ३१ वर्षीय अनिलले भने, ‘बुबाको चाहना भर्ती भएर लाहुरे होस् भन्ने थियो तर म फुटबल खेल्नतिर लागे र यहाँसम्म आइपुगे । फुटबलमा नाम पनि छ दाम पनि छ । परिवारलाई पनि साथ पनि दिए । अहिले म जुन स्थानमा छु, त्यहाँ हेर्दाखेरि बुबा खुसी नै हुनुहुन्छ होला ।’
८ अक्टोबर, २००७ मा मस्कटमा भएको विश्वकप छनोटमा ओमानसँग २–० ले पराजित भएको खेलमार्फत् उनले राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका थिए । त्यसमा उनलाई प्रशिक्षक श्याम थापाले पहिलो रोजाईमा खेलाएका थिए । मस्कटबाट सुरु भएको उनको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको करिअर दस वर्ष चल्यो । फरवार्ड अनिलले ८१ औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठको स्थान लिँदै मंगलबार ५० क्यापको कोसेढुंगा पार गरेका थिए ।
अन्तिम खेलमा उनले आफ्नो प्रभाव भने देखाउन सकेनन् । उनी साफ च्याम्पियनसिप २०१५ मा कप्तान घोषित् भएका थिए र त्यसयता नै पहिलो रोजाईको टिमबाट खेल्न संघर्षरत् रहँदै आएका थिए । उनी केही खेलमा त टिममा पनि परेका थिएनन् । नौ गोल गरेका उनले गत वर्ष सोलिडारिटी कप जितेको नेपाली टिमको पनि नेतृत्व गरेका थिए । ‘सहारा एकेडेमीबाट मलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ । पविरा, खेलाडी, साथी, कोचहरूलगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । एन्फालाई विशेष धन्यवाद,’उनले भने । ब्रिगेड ब्वाइज, थ्रीस्टार, एनआरटी, मनाङमर्स्याङ्दी र भारतको सिलोङ लाजोङ क्लबबाट खेलेका उनले क्लब फुटबललाई भने निरन्तरता दिने बताए । उनी एनआरटी र लाजोङमा छँदा नेपालकै सर्वाधिक महँगा फुटबलर थिए ।
‘सन्यासबारे पहिले पनि सोचेको थिए तर पछिल्लो समयमा खेल (लिग) नभएपछि घरेलु मैदानमा औपचारिक अन्तर्रास्ट्रिय खेल भइरहेको र यो नै सन्यास लिनलाई मेरो लागि सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो,’उनले भने, ‘उमेरअनुसार म योभन्दा बढी खेल्ने खेलाडी हो तर समयले गर्दा यति (५० खेल) नै भयो ।’
जापानमा ट्रेनिङ गरेर जेठमा फर्कंदा नै सन्यास लिने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पहिलो प्रयासमा यू–१६ को क्याम्पसम्म पुगेको थिए । त्यसपछि यू–१९ र यू–२३ टिमबाट खेल्दै राष्ट्रिय टिममा पुगेको थिए । यसरी हेर्दा १२–१३ वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलेछु । जब जापानमा ट्रेनिङका लागि गएका थियौं तब नै सन्यास लिनुपर्ने समय आयो भन्ने लागेको थियो । जुनियर खेलाडीहरू पनि राम्रा छन्, उनीहरूले पनि अवसर पाउनुपर्छ ।’
पोखराका अनिलले भने, ‘सबै खेलाडीले एक दिन सन्यास लिनैपर्छ । तर मलाई यो दिन पनि आयो भन्न अझै विश्वास लागिरहेको छैन ।’अनिललाई नेपाली फुटबलमा मैदानभित्र मिहिनेत र अनुशासनका पर्याय पनि मानिन्छन् । इंग्ल्यान्डको वोकिङ क्लबमा नौ वर्षअघि गरेको ट्रेनिङ नै करिअरले उचाई लिनुको मुख्य कारण भएको उनले बताए । दर्शकले भरिएको दशरथ रंगशालामा आठ वर्षअघि प्रधानमन्त्री कपको उपाधि जित्दाको क्षणलाई उनी अविस्मरणीय मान्छन् ।